လာမည်၊ မကြာပါ | м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင်ကာ
လာမည်၊ မကြာပါ	Posted by mm thinker on April 3, 2008
Posted in: Magazine.	Tagged: Magazine.	Leaveacomment
ဧပရယ်လထဲ ၀င်လာပြီဆိုတော့ ပြီးခဲ့တဲ့လအတွက် မတ်လပို့စ်/ဘလော့ဂ်အညွှန်းကို မျှော်သူလည်း မျှော်တော့မယ် ထင်ပါတယ်။ မဂ္ဂဇင်းနဲ့ နပန်းလုံးပွဲ ပြီးသွားပါပြီ။ မကြာခင်တင်ပေးပါမယ်လို့သာ ပြောရင်း ချွေးသိပ်ထားပါရစေဦး။
သင်ကာ Rate this:Share this:EmailTwitterFacebookPrintRedditLike this:Like Loading...
← Coming Soon – EM April Issue	Existence Magazine – Vol.1, Issue.2 – Download →	LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...